"BMW E21" ingumlando wangempela. Wonke ama-brand we-brand yaseBavaria ajwayele umlando wale moto futhi azokwazi ukukutshela amaqiniso amaningi athakazelisayo. Kulesi sihloko, uzofunda izikhathi ezithakazelisayo emlandweni wokudala imodeli, izincazelo, funda ukubuka konke okubonakalayo, ingaphakathi nokunye okuningi.
"I-E21" yafika kanjani?
Lesi simodeli yindlalifa eqondile ye-model Neue Klasse evela ku "BMW", eyakhiwe kusukela ngo-1962 kuya ku-1975. Imoto yayikhiqizwa ezinhlobonhlobo zezidumbu: kusukela e-sedan ejwayelekile emine ukuya emidlalweni yezinyawo ezintathu. Ngo-1975, ngemuva kokushintsha izinguquko eziningi, izinguquko namakhulu ezinkulungwane zezimoto ezithengisiwe, inkampani yaseBavaria inquma ukuvuselela imoto futhi iqhubekele esigabeni esisha sohlu lwemodeli. Ngakho-ke, maphakathi no-July 1975, umphakathi wanikezwa "BMW E21". Imoto ibonise ukuqala kweklasi elisha - 3 uchungechunge oluthi "BMW". Emzimbeni ukuhlelwa kwemoto kuyinquma ephakathi nendawo emithathu.
Ngaphandle kokuthandwa phakathi kwabalandeli bezimoto zaseJalimane, imoto yakwazi ukukhanya ngaphakathi kwe-motorsport. I-Motorsport i-BMW division iye yaqala ukukopisha i-engine eyingqayizivele enekhono lamahhashi angu-300. Le moto yahlanganyela emncintiswaneni weqembu leMcLaren. Ngemva kwesikhashana, imoto yashiya imodeli endala eqenjini lama-racers ukusuka ku-BMW.
Ngaphandle kwenguqulo evamile yomcibisholo womnyango womabili, lo modeli wakhiqizwa kuyi-version ye-cabriolet. Kodwa-ke, le nketho yaba yilawukhawulo futhi ayitholanga ukuqashelwa komphakathi wemoto. Ngo-1983, ukukhiqizwa kokupheka kwaqedwa. Phakathi nesikhathi esichithwa kumthumeli, umshini wathola ukushintshwa kwe-injini engu-8, okuzochazwa kamuva.
Ukukhomba i-BMW 3 Series
Ngokufika kwalesi sigqebhezana ngo-1975, inkampani ethi "BMW" yaveza uhlu olusha lwendlela yokulinganisa. Kusukela manje kuzo zonke izimoto zahanjiswa ngochungechunge. Inkomba ephelele yayinezinombolo ezintathu. Amadijithi okuqala ayingxenye yochungechunge (kulokhu "3"). Izibalo ezilandelayo zibonisa ivolumu yenjini. Isibonelo, imodeli 320 iyigumbi lesichungechunge sesithathu esinezimoto ezimbili-litre ngaphansi kwegumbi.
Ukubukeka kwezinto ezijwayelekile
Ukuma komzimba akukashintshi okuningi kusukela kokukhululwa kwe-Neue Klasse. Izici zihlale zibonakala, kodwa izinguquko zifihliwe ngokuningiliziwe. Ake siqale ukuhlola imoto kusuka phambili.
Esikhathini "BMW E21" sashiya ama-optics azungezile. Abagibeli bahamba kancane futhi bashintsha umumo: manje batholakala ngokuqondile, ngakwesokunene kwekhanda ngalinye. I- grill ye-radiator nayo iphinde ishintshwe . Manje izigaba ezimbili eziphakathi kuphela zanikezwa uhlaka lwe-chrome. I-optics yangemuva ishintshe ngokuphelele. Amakhanda ajikelezayo ashintshwa yi-rectangular. I-bumper ne-lining emzimbeni ayizange iguquke kakhulu.
E-cabin "BMW E21" konke kuncane kakhulu. Umhlobiso wangaphakathi ushukunyiswe ngokuphelele ekwenzeni okuvela kumodeli wangaphambilini. Kusukela ekuqaleni kokukhiqiza kuze kufike ngo-1981, i-BMW yafaka imodeli ngenketho eyodwa kuphela yokuqhafaza kanye ne-trim. Ngemuva kuka-1981 kanye nokubonakala kuhlu lwezinguquko ezintsha ze-injini engu-6-cylinder, abadali bemoto banikeza amakhasimende indawo entsha yokusebenza yangaphakathi kanye nemishini.
"BMW E21": izincazelo
Ngesikhathi sonke sokukhiqizwa kwale moto imishini engaphezu kuka-8 ishicilelwe. Imodeli yokuqala yochungechunge yayiyi-315 eneyunithi eyi-1.6-litre kanye ne-75 horse horse ngaphansi kwezindlu. Ngokusekelwe kule injini, inkampani yakhiqiza abangu-316 "abathathu", lapho kwaphoqelelwa khona amahhashi angu-90.
Ngo-1981, ama-injection yokuqala aqala ukuvela. I-injini enevolumu lama-1.8 amalitha nomthamo wamahhashi angu-105 wathola ukuguqulwa okusha kwe-318i. Inguqulo enamandla kunazo zonke ye-BMW 3 Series yayine-injini engu-2.3-litre kanye namahhashi angu-125. Le moto iqhubekela phambili ku-100 km / h emasekhondini angu-9.5 nje kuphela, okuyinto inkomba engakhombisi ye-serial city cut in the 1980s. Ukusetshenziswa kwamafutha kuwo wonke amalungiselelo kuphakathi kuka-9-10 amalitha ngamakhilomitha angu-100. Imoto ihamba nge-wheel drive kuphela futhi ikhiqizwa kuphela ngebhokisi legijithali lemishini.
Phakathi nokukhiqizwa kwalesi simodeli sabancintisana ekilasini le-back wheel-wheel cutting for bonke bekungekho okuningi. Ngokuyisisekelo, babeyizakwabo esitolo kusuka kwamanye ama-automaker aseJalimane. Ngoba ithonya emakethe lahlushwa izimoto ezinjenge "Opel Ascona", "Volkswagen Jetta" kanye ne "Opel Manta". Kodwa umphikisi omkhulu wayebhekwa njalo ngokuthi "Audi 80".
"BMW E21", ukulungiswa okudumile kuze kube manje phakathi kwabafundi bama-classical yezimoto, sekube isithonjana sangempela nesikhathi. Ngo-1985, imodeli "E30" ithathe indawo yomzimba ka-21. Isikhathi sonke sokukhululwa okungaphezu kwezigidi ezingu-300 amakhophi ayizinkulungwane ezingu-300 ashiye umugqa wendibano.
Marina Kudelinskaya: Biography futhi ukuphila komuntu actress Russian